जीएस प्रो हेर्नुहोस्, सम्मान सबैभन्दा "प्रीमियम" वाच ग्याजेट समाचार
जीएस प्रो हेर्नुहोस्, सम्मान सबैभन्दा "प्रीमियम" वाच
सम्मान उनले अन्तिम घटनाहरूमा चेतावनी दिएका थिए कि एक राम्रो मुठ्ठी उत्पादनहरू आउँदैछन् जुन जनताले धेरै समयदेखि मांग गरिरहेका थिए, र त्यो समय अन्तमा आएको छ। हामीसँग Honor बाट सबै समाचारहरू पत्ता लगाउनुहोस्, उनीहरूले हालसालै सुरू गरेको सब भन्दा शक्तिशाली देखीबाट सुरू गर्नुहोस्।
यस अद्भुत उपकरणको सबै सुविधाहरू पत्ता लगाउँनुहोस् जब हामी तपाईंलाई विस्तृत विवरण दिन्छौं जुन हाम्रो अनुभवले यसलाई प्रयोग गरिरहेको छ। र यदि तपाईं यसलाई किन्न चाहनुहुन्छ भने, अब तपाईं यहाँ क्लिक गरेर सबै भन्दा राम्रो मूल्य मा हुन सक्छ.
जस्तो कि अन्य अवसरहरूमा हुन्छ, हामीले यो गहन विश्लेषणको साथसाथै YouTube भिडियोको साथ निर्णय गरेका छौं जुन तपाईं यस Honor वाच GS प्रो संचालनमा देख्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईंलाई सुझाव दिन्छौं कि तपाईले फाइदा लिनुहोस् र भिडियोमा एक नजर राख्नुहोस् किनभने यसमा तपाईं अनबक्सिंग अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ बक्सको सामग्रीको मूल्यांकन गर्न, र हामी तपाईंलाई कसरी कन्फिगर गर्ने र केही सरल चरणहरूको साथ सिnch्क्रोनाइज गर्ने तरिका पनि देखाउँदछौं। अर्कोतर्फ, तपाईं सदस्यता लिन सक्नुहुनेछ र एक्चुलीडाड ग्याजेट समुदाय बढ्न जारी राख्न मद्दत गर्न सक्दछौं ताकि हामी तपाईंलाई उत्तम-गहन विश्लेषण ल्याउन जारी राख्न सक्छौं।
1 डिजाईन: परिचित र असहज
2 बेसियल स्वायत्तता र ज्ञात प्रणाली
4 सहनशीलता र प्रशिक्षण समर्थन
डिजाईन: परिचित र असहज
यो Honor वाच GS प्रो सीधा Huawei वाच GT2 प्रो अपरिहार्य ढ ev्गले पैदा गर्छ। सुरुमा, यो उपकरण स्टेनलेस स्टीलमा प्रतिरोध ग्यारेन्टीको लागि निर्मित छ, कालोमा तपाईले तस्वीरहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ, हामीसँग रबर कोटिंग छ जसले टिकाउको धेरै महत्त्वपूर्ण भावना प्रदान गर्दछ।
हामी गोलाकार डिजाइनमा फर्कन्छौं, त्यस्तै चीज जुन दुबै होनर र हुवावेले कायम राख्न जारी राख्छन् नयाँ आयताकार उपकरणको बावजुद हामीले कम समयको लागि अवलोकन गर्न सक्षम भएका छौं। Huawei वाच GT2 प्रो जस्तै पनी, flouroelastomer को रूप मा, धेरै सहज र बहुमुखी।
हामीसँग लगभग grams 45 ग्राम को वजन छ पट्टा गणना गरीरहेको छैन, जसले यो तौलको अर्को महत्त्वपूर्ण भाग लिन्छ। यो स्पष्ट छ कि हामी ती सर्तहरूमा एक प्रख्यात प्रख्यात घडीको सामना गरिरहेका छौं, तर यदि हामी प्रयोगको लागि केन्द्रित गर्छौं जसको लागि यो उद्देश्य राखिएको हो भने, केहि पनि कम आशा गरिएको थिएन।
छ GS Pro हेर्नुहोस्? राम्रो यसलाई पूर्ण ग्यारेन्टीको साथ र यस लि at्कमा उत्तम मूल्यमा पाउनुहोस्
निश्चित रूपमा यो प्रयोगकर्ता निर्देशित छ जुन यो निर्देशित छ र यसको डिजाईन, विशेष गरी असंख्य अनुकूलन सम्भावनाहरूलाई ध्यानमा राख्दै यसको स्क्रिनले Huawei स्वास्थ्य अनुप्रयोगको माध्यमबाट प्रस्ताव गर्दछ, तिनीहरूले केवल Huawei को यो उप-ब्रान्डको सफलता पुष्टि गर्दछ।
बेसियल स्वायत्तता र ज्ञात प्रणाली
हामी चार्जरबाट शुरू गर्दछौं, यी सुविधाहरूको उपकरणहरूमा ध्यानमा राख्न। यसको प्रीमियम Huawei भाइहरू भन्दा फरक, यस मामला मा ऑनर वाच जीएस प्रो चार्ज "पिन" मा दांव, कि, हामी Qi मानक मार्फत वायरलेस चार्जिंग छैन।
केहि चीज जसले हामीलाई आश्चर्यचकित गर्दैन, र आकार र बहुमुखी प्रतिभालाई ध्यानमा राख्दै चार्जिंग आधारले हामीलाई धेरै कष्टप्रद पार्दैन, इमान्दार हुन। तर सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो सेक्शन होईन, तर यसको ब्याट्रीको विस्तार जुन परिस्थितिमा हामीलाई अचम्मित गर्दछ।
फर्मले २ GPS घण्टा कुल स्वायत्तता, GPS प्रयोग गरेर र उपकरणको सामान्य प्रयोगको लागि वाचा गर्दछ। हामीसँग जम्मा 790 XNUMX ० mAh छ। हाम्रो परीक्षणहरूमा स्वायत्तताले प्रतिबद्धतालाई एक प्रतिशतमा छुआएको छ (हामी परीक्षण अवधिमा ब्याट्री पूर्ण रूपमा निकाल्न सक्षम छैनौं, तर हामीले गणना गरेका छौं)।
अर्कोतर्फ, प्रणाली स्वास्थ्य र एप्लिकेसनको माध्यमबाट सिंक्रोनाइज गरिएको छ, अघिल्लो मोडेलहरू जस्तै, हामीलाई प्राप्त डाटा व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिँदै। उसको पक्षको लागि अपरेटि system प्रणाली, Huawei / Honor आफ्नै र निजीकृत, हल्का छ र यस्तो उपकरणबाट के आशा गर्न सकिन्छ को लागी पर्याप्त कार्यक्षमता संग।
>> वाच जीएस प्रो खरीद गर्नुहोस्
हामी तपाईंको प्यानलको साथ शुरू गर्दछौं .1,39..XNUMX इन्च AMOLED (454 454 x XNUMX XNUMX), कम्पनीमा अरूलाई ट्रेस गरियो र उही समान सनसनीहरू प्रदान गर्दछ। हामीसँग यो घर बाहिर "चकचकीत" बिना नै रमाइलो गर्न पर्याप्त समायोज्य चमक छ।
सेन्सरहरूको लागि, हामी अब क्लासिक हृदय दर सेन्सरको मजा लिन गइरहेका छौं, यस पीढीको नवीनतासँग, एक सेन्सरले यो पनि निर्धारण गर्दछ कि अक्सिजन संतृप्ति रगतमा, एउटा नवीनता जुन सब भन्दा आश्वासनदायी एथलीटहरूलाई थाहा हुन्छ कि कसरी मूल्यवान् हुन्छ, टेक्निकल सेक्सनमा अझ एक कदम अगाडि। दुबै सेन्सरहरू हाम्रो परीक्षणहरूमा प्रभावकारी र प्रभावकारी साबित भएका छन्।
सेन्सरको कुरा हामी GPS र GLONASS को साथ जारी राख्छौं, एक ब्यारोमीटर र Huawei को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रबंधनको साथ यो डेटा प्रबन्ध गर्न र सतर्कताहरू प्रदान गर्न। स्पष्ट रूपमा हामीसँग निद्रा विश्लेषण छ, यसले हामीलाई अझ प्रभावकारी डेटा स collect्कलन गर्न मद्दत गर्दछ, केवल प्रशिक्षणबाट मात्रै बाँकीबाट पनि।
हामीले उल्लेख गर्नु पर्छ कि हामीसँग अभाव छ कुनै प्रकारको सम्पर्क रहित भुक्तान प्रणाली (NFC), हामीसँग वाइफाइ वा LTE छैन। हो, यो स्वास्थ्य अनुप्रयोगको केहि कार्यक्षमता को अभाव संग आईओएस संग उपयुक्त छ। यो स्पष्ट रूपमा हाम्रो परीक्षणहरूको अनुसार एन्ड्रोइड उपकरणहरूको साथ यसको कार्यहरू राम्रो प्रदर्शन गर्दछ।
सहनशीलता र प्रशिक्षण समर्थन
सहनशक्ति को रूपमा, हामीसँग समस्या बिना meters० मिटर (ATM एटीएम) सम्म यसलाई डुबाउन सक्ने क्षमता छ, हामी संग छ मिल- STD-810G सैन्य प्रमाणीकरण जसले हामीलाई विश्वसनीयताको सर्तमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्लस प्रदान गर्दछ।
हामीसँग १०० भन्दा बढी प्रशिक्षण मोडहरू छन् (नवीनतम Huawei मोडेल जस्तै) त्यसैले हामी व्यावहारिक रूपमा केहि पनि मिस गर्ने छैनौं। हामीले दौड, रोइ and र अरू केहि परीक्षण गरेका छौं, ती सबै यकिन गर्ने स्तरमा समान रूपमा प्रभावकारी छन्।
हामी तपाईंलाई मूल्य दिएर सुरू गरौं, २ saleeयूरो देखि बिक्री बिन्दुमा निर्भर गर्दै, जबकि हनरले १ 199 XNUMX यूरोको विशेष प्रस्ताव ल्याउन रोजेका छन् (लिङ्क) प्रयोगकर्ताहरूको लागि जसले यसलाई प्रि-अर्डर गर्दछ (मिति सेप्टेम्बर २ 28)।
हामी निस्सन्देह यसको लगभग २ days दिनको स्वायत्तता हाइलाइट गर्नेछौं, साथ साथै उच्च अनुकूलन क्षमता र यसलाई सlects्कलन गर्ने अनन्त डाटा। जहाँसम्म, यो आजसम्मको सबैभन्दा महँगो होनर वाचको रूपमा रोपिएको छ, एक सम्पर्क रहित भुक्तान प्रणाली वा LTE कनेक्टिविटीको अभाव, जुन प्रयोगकर्ताहरूमा निर्भर रहनको लागि हिचकिचाउन सक्छ। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंले हाम्रो विश्लेषण मनपराउनु भयो, र टिप्पणी बक्सको फाइदा लिन नहिचकिचाउनुहोस्।
GS Pro हेर्नुहोस्
मलाई अब यो चाहिन्छ
प्रतिरोध स्तरमा राम्रो विशिष्टता
अनुकूलता र प्रयोगको सजिलो
राम्रो अपरेटिंग प्रणाली र प्रशिक्षण क्षमताहरू
सम्पर्क रहित भुक्तान गर्न NFC को अनुपस्थिति
मूल्य अलि बढी हुन सक्छ
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » जीएस प्रो हेर्नुहोस्, सम्मान सबैभन्दा "प्रीमियम" वाच
ट्विन्स टिप, फ्रेशन विद्रोहीबाट TWS हेडफोन